हामी योअन्नाबाट के सिक्न सक्छौं? | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किसी कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
धेरै मानिसलाई येशूका १२ जना प्रेषित थिए भन्ने कुरा थाह छ। तर येशूसित घनिष्ठ भएका चेलाहरूमध्ये स्त्रीहरू पनि थिए भन्ने कुरा थाह नहुन सक्छ। ती स्त्रीहरूमध्ये एक जना योअन्ना थिइन्‌।—मत्ती २७:५५; लूका ८:३.
योअन्नाले येशूको सेवाको काममा के-कस्तो मदत गरिन्‌? अनि तिनको उदाहरणबाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं?
योअन्ना को थिइन्‌?
योअन्ना “हेरोदको घरको रेखदेख गर्ने नाइके चूजाकी पत्नी” थिइन्‌। हेरोद एन्टिपासको घरको रेखदेख गर्ने काम चूजाले गरेका हुन सक्छन्‌। चूजाकी पत्नी योअन्नालाई पनि येशूले निको पार्नुभएको थियो। येशू आफ्ना प्रेषितहरूसित प्रचार गर्न जानुहुँदा उहाँसँगसँगै थुप्रै स्त्री पनि जान्थे; ती स्त्रीहरूको समूहमा योअन्ना पनि थिइन्‌।—लूका ८:१-३.
यहूदी गुरुहरूले स्त्रीहरू आफ्नो नातेदारबाहेक अरू पुरुषसित घुमफिर गर्नु त परै जाओस्, सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन भनी सिकाउँथे। यहूदी पुरुषहरू स्त्रीहरूसित त्यति कुरा गर्दैनथे। समाजमा यस्तो सोचाइ व्याप्त भए तापनि येशूले योअन्ना र अरू विश्वासी स्त्रीलाई आफूसितै प्रचारकार्यमा लानुभयो।
येशू र उहाँका प्रेषितहरूसित सङ्गत गरेमा मानिसहरूले आफूलाई हेला गर्लान्‌ भनी योअन्नाले सोचिनन्‌; तिनले उहाँहरूसित सङ्गत गरिरहिन्‌। येशूको पछि लाग्नेहरू आफ्नो दैनिक कामकुरामा छाँटकाँट गर्न तयार हुनुपर्थ्यो। यस्ता अनुयायीहरूबारे येशूले यसो भन्नुभयो, “यिनीहरू नै मेरा आमा र भाइहरू हुन्‌, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्‌ र पालन गर्छन्‌।” (लूका ८:१९-२१; १८:२८-३०) येशूको पछि लाग्न त्याग गर्नेहरूलाई उहाँ आफ्नो परिवारसरह ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाह पाउँदा के तपाईंलाई खुसी लागेन र?
तिनले आफ्नो सम्पत्ति खर्चेर सेवा गरिन्‌
“आफ्नो सम्पत्ति खर्चेर” योअन्ना अनि अरू स्त्रीहरूले येशू र १२ प्रेषितको सेवा गरे। (लूका ८:३) एक जना लेखकले बताएअनुसार “स्त्रीहरूले खाना पकाए, भाँडा माझे अनि उद्रेको लुगाहरू सिलाए भनेर लूकाले भन्न खोजिरहेका थिएनन्‌। हुन त तिनीहरूले त्यस्तो काम पनि गरे होलान्‌ तर लूकाको विवरणमा त्यस कुरालाई जोड दिइएको पाइँदैन।” जेहोस्, ती स्त्रीहरूले पैसा, सरसमान वा सम्पत्ति आफ्ना साथीहरूको लागि खर्चे भन्न सकिन्छ।
येशू र उहाँका प्रेषितहरूले टाढा-टाढासम्म प्रचार गर्नुभयो। तर त्यतिबेला जीविकोपार्जनको लागि कुनै काम गर्नुभएन। उहाँहरूसित आम्दानीको स्रोत नभएकोले लगभग २० जनालाई चाहिने खानेकुरा अनि अन्य आवश्यक कुराहरू किन्न उहाँहरूलाई सजिलो थिएन। हुन त मानिसहरूले उहाँहरूको अतिथि सत्कार गर्थे। तर जीविका चलाउन उहाँहरू त्यसमै भर पर्नुहुन्नथ्यो। किनभने बाइबलमा उहाँहरूसित “पैसाको कन्तुर” थियो भनी बताइएको छ। (यूह. १२:६; १३:२८, २९) योअन्ना अनि अरू स्त्रीहरूले उहाँहरूलाई अनुदान दिएका हुन सक्छन्‌।
यहूदी स्त्रीहरूसित सरसम्पत्ति हुँदैनथ्यो भनी कोही-कोही दाबी गर्छन्‌। तर त्यतिबेलाकै लेखकहरूका अनुसार यहूदी स्त्रीले विभिन्न स्रोतबाट सरसम्पत्ति पाउन सक्थे। जस्तै: (१) दाजुभाइ नभएको खण्डमा बुबाबाट, (२) उपहारस्वरूप अरूबाट, (३) सम्बन्धविच्छेद भएमा पतिबाट, (४) पतिले आफ्नो मृत्युपश्‍चात्‌ पत्नीको नाममा छोडेर गएको इच्छापत्रबाट र (५) आफ्नै आयआर्जनबाट।
येशूका अनुयायीहरूले आफूले सकेजति अनुदान दिए भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। उहाँका अनुयायीमा धनी स्त्रीहरू पनि थिए। चूजा हेरोदको भण्डारे भएकाले चूजा र तिनकी पत्नी योअन्ना धनी थिए भनी कसै-कसैले बताएका छन्‌। येशूले लगाउनुभएको महँगो खालको लुगा योअन्ना अथवा तिनीजस्तै अरू धनी स्त्रीले दिएको हुन सक्छ। (यूह. १९:२३, २४) एक जना लेखिकाले बताएअनुसार त्यस प्रकारको लुगा “माझीहरूका श्रीमतीहरूले दिन सक्दैनन्‌।”
हुन त योअन्नाले आर्थिक सहयोग गरेको कुरा बाइबलमा तोकेरै बताइएको छैन। तर तिनले सकेजति मदत गरिन्‌। यसबाट हामी राम्रो पाठ सिक्न सक्छौं। राज्य गतिविधिलाई अघि बढाउन के दिन चाहन्छौं, त्यो हाम्रै हातको कुरा हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले खुसीसाथ दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ।—मत्ती ६:३३; मर्कू. १४:८; २ कोरि. ९:७.
योअन्ना येशूप्रति वफादार रहिन्‌
येशूलाई मृत्युदण्ड दिइँदा सायद योअन्ना अरू स्त्रीसँगै त्यहाँ थिइन्‌। ती स्त्रीहरू पनि “उहाँसँगै हिंड्थे र उहाँको सेवा-सुसार गर्थे। यसबाहेक उहाँसँगै यरूशलेम उक्लेका अरू थुप्रै स्त्री पनि त्यहीं थिए।” (मर्कू. १५:४१) येशूको शव खम्बाबाट निकालेपछि “गालीलदेखि उहाँसँगै आएका स्त्रीहरू पछि-पछि लागे अनि उहाँलाई राखिएको चिहानलाई नियाल्नुका साथै उहाँको शवलाई कसरी राखिएको छ, त्यो पनि तिनीहरूले हेरे। अनि सुगन्धित मसला र तेल तयार पार्न तिनीहरू फर्के।” ती स्त्रीहरू “मरियम मग्दलिनी, योअन्ना र याकूबकी आमा मरियम” थिए भनी लूकाले लेखे। तिनीहरू विश्राम दिनपछि येशूलाई राखिएको चिहान हेर्न फर्के। त्यतिबेला तिनीहरूलाई स्वर्गदूतले येशू पुनर्जीवित हुनुभएको कुरा बताए।—लूका २३:५५–२४:१०.
योअन्ना अनि अरू विश्वासी स्त्रीहरूले येशूको लागि सकेजति गरे
इस्वी संवत्‌ ३३ पेन्तिकोसमा येशूकी आमा र उहाँका भाइहरू अनि अन्य चेलाहरूका साथै योअन्ना पनि यरूशलेममा भेला भएको हुनुपर्छ। (प्रेषि. १:१२-१४) योअन्नाको पति चूजा हेरोदको घरमा काम गर्ने भएकोले तिनलाई हेरोद एन्टिपासको बारेमा थुप्रै कुरा थाह भएको हुनुपर्छ। लूकाले हेरोदसित सम्बन्धित जानकारीहरू योअन्नाबाट पाएको हुन सक्छ। त्यसैले योअन्नाको नाम तोकेरै उल्लेख गर्ने लेखक लूका मात्र हुन्‌।—लूका ८:३; ९:७-९; २३:८-१२; २४:१०.
योअन्नाको विवरणबाट हामी महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं। तिनले येशूको लागि सकेजति गरिन्‌। तिनको अनुदानले येशू, उहाँका १२ प्रेषित र अन्य चेलाहरूलाई यात्रा गर्न अनि प्रचार गर्न मदत पुगेको देख्दा तिनलाई पक्कै खुसी लागेको हुनुपर्छ। योअन्नाले येशूको सेवा गरिन्‌ अनि गाह्रो अवस्था आइपर्दा पनि उहाँप्रति वफादार रहिन्‌। त्यसैले ख्रीष्टियन स्त्रीहरूले तिनको अनुकरण गर्नुपर्छ।